काठमाडौं, ९ असार । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सर्लाहीमा विप्लव समूहका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मुठभेडमै मारिएको बताएका छन् । सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै बादलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘प्रहरीको जवाफि कारवाहिमा मारिएका हुन’ बादलले बैठकमा भने ‘अनटेस्ट मोटरसाइकल सहितका दुईवटा मोटरसाइकलमा आइरहेका चार जना व्यक्तिहरुले प्रहरी टोलीलाई देख्नासाथ मोटरसाइकल छाडी प्रहरीलाई लक्षित गरी आफूहरुसँग रहेको हतियारबाट फायर गरेको हो ।’ उनले भने ‘प्रहरी टोलीले आत्मरक्षाको लागि जवाफी फायर गर्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
त्यस्तै बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले विगतमा जस्तै मुठभेडका नाममा हत्या भएको बताएका छन् । ‘कुमार पौडेलको घटनामा सरकारको एउटा रिर्पोट होला । तर हामीसँग जनताको रिर्पोट पनि छ, तस्बिर पनि छ’ शर्माले भने ।
शर्माले भने ‘५÷६ ठाँउमा त हात नै भाँचिएको छ । पहिले हात भाँचियो कि गोली हानेर हात भाँचिएको हो ? यसले त विद्रोह ल्याउँछ ।’
उनले भने ‘प्रहरीको संविधान कार्यान्वन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छैन रु यस्ता घटनाका बारेका फेरि प्रश्न सोधिराख्ने ठाउँ नआओस् । पाँच सय जना कार्यकर्ता त पक्राउ गर्नुभएको छ नि, त्यसमा हामीले प्रश्न उठाएका छौँ र ? त्यसलाई वार्तामार्फत अघि बढाउनुपर्छ ।’
२०७६ असार ९ सोमबार ११:५१:०० मा प्रकाशित